မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: Vueling Airlines VY 1985 . .. . .
Vueling Airlines VY 1985 . .. . . .... ...... (De L'Aéroport de Paris- Orly-Ouest à Aeroporto do Porto-Francisco Sá Carneiro) တိမ်ထုပေါ်မှာ လေယာဉ်စီးခြင်းကလည်း ဖီလင်တမျိုး ခံစားရပါတယ်၊ မောင်ရင်ငတေတို့
မြေကြီးပေါ်ကနေ ဟိုးမိုးကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်ဖြူဖြူဖြစ်ဖြစ် တိမ်ညိုညိုဖြစ်ဖြစ် မည်းမှောင်နေတဲ့ တိမ်ထုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးသက်လေအေးအေးနဲ့အတူ ပြေးနေတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ၊ မောင်ရင်ငတေကတော့ အဲဒီလို ခေါင်းကိုမော့လို့ ကြည့်ခဲ့ရပါတဲ့ ဒီ တိမ်ဆိုင်တိမ်လိပ်တိမ်ထုတွေက မျက်စေ့အောက်မှာ ရောက်နေပြန်တော့လည်း ခံစားရတဲ့ဖီလင်က မတူထူးခြားတဲ့ နောက်တမျိုးပေ့ါ၊ အဲဒါကို အမှတ်တယ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မိတာပါ၊ (မရငတ) ၁၀၁၂၂၀၁၅